Indlela yokubona ikhadi levidyo kukhompyutha
Amakhompiyutha, Izinhlelo Zokusebenza
Kwezinye izimo, umsebenzisi uzodinga ukwazi ikhadi levidyo elisetshenziswe kukhompyutha yakhe. Lokhu kubaluleke kakhulu kubadlali, ngoba isifiso sokuthola okuningi emidlalweni yenza kube yimfuneko ukuqapha ngokucophelela ukukhishwa kwamashayeli amasha. Ngaphezu kwalokho, ukuze uthole ukuthi imuphi umdlalo osebenzayo kukhompyutheni, kwanele ukwazi kuphela imingcele yekhadi lakho levidyo. Lokhu kuzosindisa isikhathi, okungeke kusetshenziswe ngenye indlela ekufakweni. Kodwa ungayithola kanjani ikhadi levidiyo? Sizozama ukuphendula lo mbuzo.
Kunezindlela eziningana ezilula zokuthola ukuthi iyiphi ikhadi levidiyo elihilelekile ohlelweni. I-Windows XP, enye yezindlela ezilula ukusebenzisa imenyu, ucingo olulula kakhulu. Ukwenza lokhu, chofoza ngakwesokudla kunoma iyiphi isikhala samahhala kudeskithophu. Kuhlu oluvela, khetha Properties. Khona-ke udinga ukuya kuthebhu yezilungiselelo. Emgqeni "Isimo sokuxhuma isikrini" futhi ikhamera yevidiyo yamanje izoboniswa.
Ku-Windows 7, inqubo yokuthola ikhadi levidiyo ihlukile kakhulu. Ngemuva kokuchofoza kokuqala kwenkinobho elungile, kuzodingeka ukhethe ukungena "Properties", kodwa "Isixazululo Sesikrini". Bese uye kumathebhu "Okuthuthukisiwe", lapho ingxenye yamenyu "I-Adapter" izotholakala khona. Ngokuyikhetha, umsebenzisi uzonikezwa ulwazi mayelana nekhadi levidiyo elisetshenziswayo.
Indlela yesibili yokufunda ikhadi levidiyo ihilela ukusetshenziswa kweMenenja yedivayisi, etholakala ngokuchofoza kwesokudla kwisithonjana sekhompyutheni ku-Windows 7. Ngenguqulo yangaphambilini ye-Windows XP, khetha "Ikhompyutha yami". Emenyu ebonakalayo, umsebenzisi kufanele uchofoze "Properties", emva kwalokho iwindi lizovulwa ngokuzenzekela, lapho umsebenzi obangela ukuqaliswa "kweMenenja yeDivaysi" kuzotholakala. Uhlu lwazo zonke izinto ezihlanjululwe yizigaba zizovela ngaphambi komsebenzisi.
Ukuthola ulwazi mayelana nekhadi levidyo, udinga ukuchofoza inkinobho yesokunxele yegundane kwento eveziwe "Amaphathoji wevidiyo" kanye. Khona-ke into engezansi ngencazelo ye-accelerator yemifanekiso izovuleka. Uma zikhona eziningana, zonke zizochazwa kule ndima, lapho kwikhadi ngalinye levidiyo kuzoba khona into encane.
Enye indlela elula yokuthola ikhadi lakho levidyo ukuqoqa ulwazi ngezinye zezicelo ze-DirectX. Ungawugijima ngokuthayipha i- "dxdiag" emgqeni wokulayela. Umzila womyalo ubizwa ngezindlela ezimbili:
1) "Qala", bese u-"Run".
2) Inhlanganisela yezihluthulelo "Win + R".
Uhlelo lokusebenza lungacelwa imvume yokuqinisekisa izignali zedijithali zabashayeli. Imvume yokwenza lo msebenzi owengeziwe ayidingekile. Khona-ke iwindi lombuso libonakala, lapho udinga ukukhetha "Ukubonisa" noma "Isikrini", kuye ngokuthi inguqulo yesistimu. Emkhakheni othi "Igama" imodeli yekhadi levidyo izoboniswa, futhi emgqeni "Inkumbulo Yonke", ngokulandelanayo, inani lememori elihlanganisiwe ku-adapter yevidiyo. Kumele kuqashelwe ukuthi kwezinye izimo, ngokwesibonelo, uma usebenzisa abashayeli abesikhashana, lesi sibalo singase singabi yiqiniso.
Impendulo yalo mbuzo othandwayo mayelana nendlela yokufunda ikhadi levidiyo ingatholakala ngokusetshenziswa kwezinhlelo zangaphandle. Phakathi kwazo kukhona kokubili okukhokhelwe (konke okuziwa e-Everest), futhi mahhala, okungeke kube nzima ukuthola.
Uhlelo lokusebenza lwe- "Android" "In Touch" ku-smartphone yakho
Indlela yokubuyekeza "i-Windows 7" ku "Windows 8" ngokuzimela? I-Windows 8
Ungasusa kanjani kusukela ku-"Thola i-Windows 10" ithreyi: izindlela ezilula
Indlela yokulungisa amawindi xp ngaphandle kokubuyisela kabusha.
Indlela yokubuyekeza "i-Explorer"?
Indlela yokwandisa isivinini sakho sekhompyutha yakho
"Indapamide": nozakwabo. "Indapamide": izibuyekezo odokotela
Umuthi 'Levomitsitinovye lehla'
Zonke fun, izinyosi ubuchwepheshe okuqukethwe
Russian ski resort. Ezokuzijabulisa eziyinkimbinkimbi "Beaver Log", Krasnoyarsk
Ukuphila Lucy Davis eqondene nabo umsebenzi
Izinkampani Izinsiza kusebenza Huter: kusilungisi omuhle engadini isayithi
Ponseti ukwelashwa kokukhubazeka ku
Aviamodelirovaniye izandla siqu: indlela yokwenza indiza ngokhuni
I-Audi A6 Allroad Quattro: imininingwane, ukubuyekezwa komnikazi. Izimoto